အရောင်2ဖြည့်ပါ - Tangram လုပ်ကွက် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အရောင်2ဖြည့်ပါ - Tangram လုပ်ကွက်
အရောင်2ဖြည့်ပါ - Tangram လုပ်ကွက် APK ကို
အရောင်2ဖြည့်ပါ - Tangram လုပ်ကွက်စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးယုတ္တိဗေဒပဟေဠိ & အစဉ်အဆက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ကွက်ပဟေဠိဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတိုင်းဖြစ်နိုင်သောလမ်းအတွက်ယင်း၏နောင်တော် outdoes: multiplayer mode, နယူးကွေးကိုအပိုင်းပိုင်း, ရောင်စုံဂရပ်ဖစ်, တိုးတက်လာသောဂိမ်း, အရိပ်အမြွက်နှင့်ပိုပြီး! အရောင်2ဖြည့်ပါ - Tangram လုပ်ကွက်စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးယုတ္တိဗေဒပဟေဠိ & အစဉ်အဆက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ကွက်ပဟေဠိပါ!
ကဖြည့်စွက်ရန်ဘုတ်အဖွဲ့သို့အရောင်အပိုငျးပိုငျး drag and drop ရန်သင့်လက်ချောင်းကိုသုံးပါ
★ KEY ကိုအင်္ဂါရပ်များ★
အသက်အရွယ်အဘို့ * တစ်ဦးကယုတ္တိဗေဒပဟေဠိ
အစဉ်အဆက် * အကောင်းဆုံး Tangram ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပဟေဠိ!
* ရိုးရှင်းသောလွယ်ကူထိန်းချုပ်မှုရုံဘုတ်အဖွဲ့သို့အပိုင်းပိုင်း drag and drop
ကလေးတွေနှင့်ပေါ့ပေါ့ puzzlers များအတွက် * လွယ်ကူအဆင့်ဆင့်, ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ကိုမှန်ကန်စိန်ခေါ်မှု!
* 1400 + အခမဲ့ရောင်စုံအဆင့်ဆင့်
* ကွေးအပိုင်းပိုင်းမိတ်ဆက်ခြင်း: ပျော်စရာယခုအားလုံးပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရောင်များကိုလာ!
ရောင်စုံအဆင့်ဆင့်၏ * 8 အမျိုးအစားများ: ဂန္ထဝင်, လုပ်ကွက်, Curves နှင့်ပိုပြီး!
သင်နှင့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမရရှိနိုင်ပါကပိုအရိပ်အမြွက်ကူညီရန် * အခမဲ့အရိပ်အမြွက်
လာ * နောက်ထပ်အဆင့်ကိုအခမဲ့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်😉
1400 ရောင်စုံအဆင့်ဆင့်ထက်ပိုပြီးသင်နှင့်ကစားသမားများအားလုံး type ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်: ကလေးတွေသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ဂိမ်းကစားတစ်ဦးအမြန်-ပျော်စရာယုတ္တိဗေဒပဟေဠိရှာနေနှင့်ကျွမ်းကျင်သူပိတ်ပင်တားဆီးမှု puzzlers အစစ်အမှန်စိန်ခေါ်မှုရှာဖွေနေ။ သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးဖြည့်စွက်နိုင်ပါသလား?
အရောင်2ဖြည့်ပါ - Tangram လုပ်ကွက်သင်တို့ရှိသမျှအဘို့အလုပ်တစ်ယုတ္တိဗေဒ tangram ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပဟေဠိပါ! Facebook မှာ facebook.com/leo.desol.3 အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာဖို့မေ့လျော့ don't နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျရှိစေခြင်းငှါမဆိုအကြံပြုချက် / မှတ်ချက်များ / အတွေးအခေါ်များကိုသိပါစေ ကျေးဇူးပြု. !
အရောင်2ဖြည့်ပါခံစားကြည့်ပါ - Tangram လုပ်ကွက်
အရောင်2ဖြည့်ပါ - Tangram လုပ်ကွက်
10.60 ကို MB
လီယို De Sol အားကစားပြိုင်ပွဲ